अदालतमा रविले दिएको भिडियोको बयानले सबैलाई बनायो चकित, वोकिलको अघि खुलेरै यसो भनिदिए ! – PanchKhal Online
Home/समाचार/अदालतमा रविले दिएको भिडियोको बयानले सबैलाई बनायो चकित, वोकिलको अघि खुलेरै यसो भनिदिए !
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको प्रकरणमा प क्राउ परेका सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न पुनः पाँच दिनको म्याद थपिएको छ । जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको एकल इजालासले लामिछानेसहित तीन जनालाई थप पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो ।
पाँच दिन हिरासतमा राखेर सोधपुछ गरेपछि प्रहरीले लामिछानेसहित तीन जनालाई दोस्रो पटक म्याद थपका लागि आज अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । वादीको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता यदु शर्माले बहस गर्नुभएको थियो । प्रतिवादीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिल पोखरेल, सुशील पन्त र चूडामणि सापकोटाले बहस गर्नुभएको हो । आरोपी तीन जनालाई बिहान १० बजे नै अदालत लगिएको थियो ।
लामिछानेसहित पत्रकार युवराज कँडेल र रुकु कार्की (अस्मिता) विरुद्ध शालिकराम पुडासैनी आत्मह त्या दुरुत्साहन मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । शुक्रबार चितवन जिल्ला अदालतले रविसहित तीनैजनालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अनुसन्धानका अन्य पाटोहरु बाँकी रहेकाले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको पत्रअनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले १० दिन म्याद थप माग गरेको जिल्ला अदालत चितवनका स्रेस्तेदार रुद्रमणि गिरीले बताउनुभयो । सरकारी वकिलको मागका आधारमा पाँच दिन म्याद थप गरिएको गिरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । तीन नम्बर इजलासमा बहस भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गएको बिहीबार काठमाडौँबाट प क्राउ गरेर चितवन ल्याइएका उनीहरुलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको समय सोमबार सकिएको थियो । पुडासैनीले मृ त्युअघि रेकर्ड गरेको भिडियोमा पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीका कारण आफू म र्न बाध्य भएको बताएकाले प्रहरीले तीनै जनालाई पक्राउ गरी घ टनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले श व परीक्षण रिपोर्ट, भिडियोको डिजिटल ल्याब रिर्पोट, पुडासैनीले डोरी किनेको सिसीटिभी फुटेजलगायत अन्य रिर्पोट प्राप्त भइसकेको र अदालतबाट थप पाँच दिनको अनुमति प्राप्त भएकाले अनुसन्धानमा सहज हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। परीक्षण रिपोर्टमा पत्रकार पुडासैनीकोे आत्मह त्या कै कारण ज्यान गएको उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
भ्रामक कन्टेन्ट राख्ने ‘वेवसाइट’ र भिड उत्तेजित बनाउने ‘युट्युबर’ लाई घरघर गएर भएपनि समात्छौ